Dabaq ku yaalla Muqdisho oo soo dumay iyo wararkii ugu dambeeyay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Warar dheeraad ah ayaa laga helayaa Guri dabaq ah oo ku yaallay degmada Shangaani ee Gobolka Banaadir oo barqanimadii Maanta soo dumay, kaasi oo ka dhismaa dhimo horey, sida lagu arkyay Muuqaalo laga duubay.
Guriga ayaa waxaa uu kusoo dumay qoysas muddo deganaa, waxaana la sheegay in shalay la dareemay in Gurigaas laga cabsi qabo inuu dumo, maadaama dadkii deganaa ay arkeen Guriga oo dabeyn xoogan garaaceysa.
Haweeney kamid ah dadka deganaa Guriga dumay oo la hadashay warbaahinta ayaa u sheegtay in dadka qaarkood ay goor hore kasii baxeen Guriga, isla markaana iyada iyo Caruur ay ka dhashay ka tageen halkaas, barqadii Maantana uu dumay.
Khasaaro dhaawacyo ah ayaa ka dhashay dhismaha dumay Guriga, isla markaana waxaa dadkii dhaawacyada soo gaareen gurmad u sameeyay dad shacab ah oo tegay goobta, waxaana weli halkaas lagu la’yahay dad nool.
Ma jiro weli wax war ah oo kasoo baxay Maamulka Gobolka Banaadir iyo kan degmada Shangaani oo ay uga hadlayaan Gurigaas dumar, in kastoo Mas’uuliyiin ka tirsan Maamulka gobolka ay gaareen goobta.